Xalka Colaada CEEL-AFWEYN (5 Qodob): Ku Socota Madaxweynaha Somaliland | WAJAALE NEWS
In la sameeyo Guddi Xeer-Beegti ah oo adag isla markaana kalsooni buuxda lagu qabo oo laga ilaaliyo in lagu farogeliyo hawshooda, Gudidaas oo samir/dulqaad u leh wakhti kasta oo ay qaadanayso hawshani.
Si arrinta looga sal gaadho oo colaada loo soo afjaro, Dawladu keliya waa in ay qabanqaabinta Gudida mooyaane aanay wax talo iyo taakulo ah siinin Xeer-Beegtida si ay madax bannaani u dareemaan.
In wax kasta oo lagu heshiiyo la fuliyo isla markaana ay Xeer-Beegtidu ku ilaaliso laba dhinac wixii lagu heshiiyay.
Ciddii jebisa wixii lagu heshiiyana Xukunkeeda/Ganaaxeeda ay Xeer-Beegtiduyeelato.
Waa in Xooga iyo Xooolaha ku baxayaa Xeer-Beegtida marti looga ahaado labada Beelood iyo Bulsho weynta Somaliland.